အရသာအားလုံးအတွက်အကောင်းဆုံးဂျင် (၁၁) ခု၊ ဘယ်တစ်ခုကိုသင်ကြိုက်သလဲ။ | စတိုင်လ်အမျိုးသားများ
တစ်ခြားတစ်ယောက်သို့မဟုတ်အခြားအချိုရည်များနှင့်ပေါင်းပြီးဂျင်သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အမြဲတမ်းဖက်ရှင်ကျနေသည်။ စပိန်နိုင်ငံသည်စားသုံးမှုအမြင့်ဆုံးနှင့်တတိယနိုင်ငံတွင်တည်ရှိသည် ဖိလစ်ပိုင်နှင့်ယူနိုက်တက်စတိတ်သည်အကြီးဆုံးဖြစ်သည်။ အင်္ဂလန်သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကောင်းဆုံးဂျင်းများ၏အရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်။
2 အကောင်းတစ် ဦး ဂျင်၏မြည်းစမ်းမှတ်စုများ
3.1 ဝီလျံ Chase
3.3 Hendrick '' ဂျင်
3.6 JJ Whitley လန်ဒန်အပူပိုင်းဂျင်
4.1 BCN ဂျင်
4.3 Marcar Indonesian
Gin သည် ၁၆ ရာစုနယ်သာလန်နိုင်ငံမှစတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အဖျော်ယမကာဖြစ်သောမုယောစပါးသို့မဟုတ်ပြောင်းဖူးစေ့တို့မှအစဉ်အလာရရှိသောသောက်စရာဖြစ်သည်။ သို့သော်တီထွင်သူအမြောက်အများသည်ယခုအခါ၎င်းကိုအာလူးနှင့်အာလူးအရက်များမှပြုလုပ်သည်။
ထုတ်လုပ်သူ၏စတိုင်ပေါ် မူတည်၍ ၎င်းသည်အသီးသီး၊ ကရမ်နမ်နှင့်အမျိုးမျိုးသောဟင်းသီးဟင်းရွက်များသို့မဟုတ်သစ်သီးများနှင့်အရသာရှိသည်။။ ၎င်း၏အရက်ဘွဲ့သည်40ºဝန်းကျင်; လက်တွေ့တွင်အများအားဖြင့်တစ် ဦး တည်းစားသုံးခြင်းမခံရပါ။ လတ်တလောတွင်၎င်းကိုကော့တေးလ်အတွက်အခြေခံအဖြစ်မကြာခဏအသုံးပြုလေ့ရှိပြီး၎င်းကိုမတူညီသောနည်းများဖြင့်ပေါင်းစပ်ထားသည်။ Gintonic သည်ဥပမာအားဖြင့်ပေါင်းစပ်ထားသောဂန္ထဝင်ဖြစ်သည်။
အကောင်းတစ် ဦး ဂျင်၏မြည်းစမ်းမှတ်စုများ
ဂျင်အားလုံးအတူတူမရှိကြပေ။ ၄ င်းတို့သည်ထုတ်လုပ်မှုနည်းစနစ်များအထူးသဖြင့် ၄ င်းတို့ကိုဖြစ်စေသောအပင်များနှင့်အချဉ်ပေါက်ခြင်းများပြုလုပ်သောဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်သစ်သီးများတွင်ကွဲပြားကြသည်။ ဤတန်ဖိုးများသည်ဂျင်တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်ကိုဆုံးဖြတ်လိမ့်မည် သိသာထင်ရှားသောပန်းထိတွေ့မှုနှင့်အတူသို့မဟုတ် citrus ပန်းစည်းကိုအလေးထားသည်.
တစ်ဂျင်ကိုမြည်းစမ်းဖို့ ၂၁-၂၃ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကြားတွင်စမ်းသပ်ရန်အကြံပြုသည်။ ကွေးသောဖန်သည်သင့်အားသစ်သီး၊ ပန်း၊ ဤရွေ့ကားလည်း၎င်း၏အရသာအတွက်ဖမ်းမိသောမှတ်စုများဖြစ်ကြသည်; ခံတွင်း၌ချောမွေ့။ လန်းဆန်းစေသည်။ ၎င်း၏ပြင်ဆင်မှုတွင်အသုံးပြုသောရုက္ခဗေဒပညာရှင်များသည်အရသာအပေါ်အထူးသက်ရောက်မှုရှိလိမ့်မည်။
ဂျင်တစ်ခုချင်းစီတွင်သူ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရှိပြီး၎င်းသည်ထူးခြားပြီးထူးခြားသည်။ အသိအမှတ်ပြုဆုံးသောစက်ရုံများသည်သူတို့၏ဂျင်ကိုထူးခြားစွာလိုချင်သည်ဆိုပါကကွဲပြားခြားနားသောထိတွေ့မှုကိုလိုအပ်သည်ကိုသိကြသည်။ ကမ္ဘာပေါ်တွင်ပရီမီယံဟုယူဆသောဂျင်များသည်ဘာတွေလဲ။
နှစ်နှစ်ထုတ်လုပ်မှုကာလအတွင်း၊ ဤဂျင်သည်အကြိမ်တစ်ရာကျော်ရေခံသည်။ အခြေစိုက်စခန်းသည်သမ်မာနှင့်အာလူးအချဉ်ဖောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ရုက္ခဗေဒဆိုင်ရာပါဝင်ပစ္စည်းများထို့နောက်တန်ဖိုးထားသောတို့တွင်ထည့်သွင်းထားပါသည် သစ်ကြံပိုး၊ အခွံမာသီး၊ ဂျင်း၊ ဗာဒံသီး၊ နံနံ၊ စပျစ်သီး၊
၎င်းသည်ပန်းဂေါ်ဖီနှင့်မျိုးစိတ်၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့် citrus တို့၏သဟဇာတဖြစ်မှုနှင့်ပေါင်းစပ်ထားသောရိုးရာရနံ့အရသာနှင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိသည်။
၀ ယ်ပါ - ဂျီနီဗာဝီလျံ Chase
ဒါဟာကော့တေးဘားနှင့်အတူအလွန်ရေပန်းစားသည်။ Juniper, နံနံစေ့၊ licorice နှင့်အင်ဂျလီကာအမြစ်တို့ကိုအခြေခံပေါင်းခံများသို့ပေါင်းစပ်ထားသည်။ ပေါင်းခံသည်၎င်း၏အနှစ်သာရအားမပြောင်းလဲသောရိုးရာအစဉ်အလာများဖြင့်ပြုလုပ်သည်။
သောက်သောအခါ ဂျင်၏ခြောက်သွေ့သောဇာတ်ကောင်နှင့်ချောမွေ့မှုကိုမီးမောင်းထိုးပြသည်။ ၎င်းတွင်နူးညံ့သိမ်မွေ့သောဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်နံ့သာမျိုးများကိုတွေ့ရသည်။
၀ ယ်ပါ - Tanqueray လန်ဒန်အပူပိုင်းဂျင်
Hendrick '' ဂျင်
၎င်းကို "သခွားသီး၏ဂျင်" အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုသည်။ အတိအကျဆိုသော်သခွားသီးသည်၎င်း၏ထုတ်လုပ်မှုအတွက်အဓိကပါဝင်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ရနံ့၊ နံနံ၊ အခွံ၊ ဘူဂေးရီးယားနှင်းဆီပွင့်ပွင့်များနှင့်အဓိကအားဖြင့်အဓိကသကြားဓာတ်မှာသခွားသီးဖြစ်သည်။ အမြင်အာရုံကိုဆေးဆိုင်ကွန်တိန်နာဟောင်းတစ်လုံးနှင့်ဆင်တူသောပုလင်းတစ်ခုမှအလွယ်တကူမှတ်မိနိုင်သည်။
၀ ယ်ပါ - Hendrick '' ဂျင်
"အေးနေသမျှကာလပတ်လုံး Oxley ရှိလိမ့်မည်" ဟု၎င်း၏ထုတ်လုပ်သူများကပြောကြားသည်။ အတိအကျ အအေးထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်၏အခြေခံသည်။ ပုံမှန်အပူ -based ပေါင်းခံလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအစား, Oxley အအေးကိုအသုံးပြုသည်။ အပူချိန်သုည (၅) ဒီဂရီလိုအပ်တယ်။
ရလဒ်? ဖော်ရွေသောရုက္ခဗေဒပညာရှင် (၁၁) ပါးကိုပေါင်းစပ်မိသည့်အလွန်ပြင်းထန်သောအရသာရှိသောကျောက်ဆောင်ဂျင်တစ်လုံး။ Herbaceous နှင့် Citrus သည်မျိုးစိတ်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုတွင်အကန့်အသတ်ဖြင့်သာထုတ်လုပ်ထားသောဂျင်ဖြစ်သည်။
၀ ယ်ပါ - ဂျင် oxley
ဂျင်လောကရှိအသစ်အဆန်းတစ်ခုကိုရိုက်ထည့်ပါ။ ဘိန်းမျိုးစေ့များနှင့်နဂါးမျက်လုံးကိုသုံးပါ။ နှင့်ဂျင်ချစ်သူများများအတွက်ကွဲပြားခြားနားသော option ကိုပေးထားပါတယ်။
၎င်း၏ထုတ်လုပ်သူစီစဉ်ခဲ့ကြသည် အလွန်သမ္မာသတိရှိကြလော့ပုလင်းအရောင်မီးသွေးမီးခိုးရောင်; အမြင်အားဖြင့်၎င်းတွင်သောက်ရန်၎င်း၏အမည်ကိုပေးသောအင်္ဂလိပ်ခွေးတစ်ကောင်၏လည်ပတ်နှင့်တူသည်။
၀ ယ်ပါ - ခွေးဘီလူး
JJ Whitley လန်ဒန်အပူပိုင်းဂျင်
ဒါဟာချောချောမွေ့မွေ့ဂျင်ပါပဲ. ၎င်းသည်ရနံ့၊ ပါရာခရမ်းရောင်၊ ၎င်း၏အနည်းငယ်အတန်ငယ်ခြောက်သွေ့သောဇာတ်ကောင်ကတစ် ဦး အထူးသဖြင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးပေးစေခြင်းငှါက compose သောရှစ်ရုက္ခဗေဒ၏အရသာပူးပေါင်းမည်။
ပရီမီယံဂျင်စာရင်းအများစုသည်ထိတွေ့ပြီးသားများအပြင်ထပ်မံပါဝင်သည် - Black Death Gin, Gin Brecon Specia Edition, Boë Premiun Scottish Gin, Whitley Neill, Bluecoat Organic ။ အလွန်ကောင်းမွန်သောအရည်အသွေးနှင့်ကမ္ဘာအနှံ့အသိအမှတ်ပြုထားသောအဖျော်ယမကာများအားလုံး။
၎င်းကို“ ဘာစီလိုနာ၏ဂျင်” ဟုလူသိများသည်။ ဒါဟာအလွန်မြေထဲပင်လယ်ဂျင်ဖြစ်ပါတယ်; ၎င်းသည်တက်စေသောရုက္ခဗေဒပညာရပ်များပေါ် မူတည်၍ ဤဒေသ၏ထူးခြားသောအရသာရှိသည်။ Rosemary, စမုန်နက်, သင်္ဘောသဖန်းသီး, စပျစ်သီးနှင့်ထင်းရှူးအညွန့် standout မှတ်စုများဖြစ်ကြသည်။
၀ ယ်ပါ - BCN ဂျင်
၎င်းသည်ဂျုံစေ့၊ နံနံ၊ အင်ဂျလီကာအမြစ်၊ နှင်းပန်း၊ ကာမိုနမ်နှင့်သံပုရာအခွံတို့ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောပြောင်းဖူးစေ့များဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ၎င်းသည်လတ်ဆတ်ပြီးရှေ့နောက်ညီညွတ်မှုတွင်အလင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုသောက်သောအခါ Citrus နှင့်ချိုသောထိတွေ့မှုကိုရရှိနိုင်သည်။
၎င်း၏အသေးစိတ်လေ့လာမှု၏ထူးခြားချက်မှာမီးတောင်များမှကျောက်တုံးများထဲသို့စီးဝင်သောမူလရေဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သတ္တုဓာတ်များပြားစွာထွက်စေသည်သရန်း၊ ကာဒွန်နမ်၊ အန်ဂျလီကာအမြစ်နှင့်ချိုချဉ်သီးတို့နှင့်အတူ၎င်းသည်အထူးကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကိုပေးသည်။
၎င်းသည်စိတ်ဝင်စားဖွယ်မြေထဲပင်လယ်ရုက္ခဗေဒပညာရှင်ပေါင်းစပ်မှု၏ရလဒ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သံပုရာ၊ အာရဇ်ပင်နှင့် Laurel ကဲ့သို့သောအခြား exotics များဖြစ်သော lime, kaffir, coriander ဖြစ်သည်။ ၎င်းကို "gastronomic gin" ဟုခေါ်သည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းကိုအသေးစိတ်ရေးဆွဲစဉ်တွင်ဟိုက်ဒင်းဟင်းလျာ၏အခြေခံမူကိုအသုံးပြုထားသည်။
၎င်းတို့သည် Gin Meigas Fóra၊ Ana London Dry Gin, Sikkim Fraise, Ginbraltar, Port of Dragons စသည်တို့အတွက်စျေးကွက်တွင်ခိုင်မာသောနေရာတွင်ရှိသည်။
၀ ယ်ပါ - ကျောက်တံတား
တစ် ဦး တည်းသို့မဟုတ်အစဉ်အလာ Gintonic ၌, ဂျင် timeless သည်နှင့်တိုင်းဖျော်ယမကာစပ်၏ hit ထဲမှာအမြဲတမ်းဖြစ်ပါတယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတိုင်လ်အမျိုးသားများ » လူနေမှုပုံစံစတဲ့ » ယဉျကြေးမှု » အကောင်းဆုံးဂျင်
ရွေးချယ်မှုကောင်းသော်လည်း၊ ဂန္ထဝင်ဘုံဘေ Shappire ပျောက်ဆုံးနေသည်။ ၎င်းသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်ဂန္ထဝင်နှင့်တန်ဖိုးအရှိဆုံးဂျင်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
စပိန်ဂျင်တွေပါ ၀ င်တာအရမ်းကောင်းတယ်၊ သူတို့မှာတူညီတဲ့နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုမှုမရှိသော်လည်း၊ များစွာသောငါတို့မှာအများကြီးရှိပြီးသားပါ ဂျင်အမှတ်တံဆိပ် BCN Gin ကဲ့သို့သောအကောင်းဆုံးပရီမီယံဂျင်များကြားတွင်နယ်ပယ်တစ်ခုဖြစ်လာသည်။
ငါသည်သင်တို့ကိုအလွန်ကြီးစွာသောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအသိအမှတ်ပြုမှုရတဲ့သော Gin Mare ပါဝင်သည်အကြံပြုပါသည်။